HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 18-JULY-2020
Saturday July 18, 2020 - 10:10:25 in Wararka by Mogadishu Times
Farmaajo oo maanta ku wajahan Dhuusa- mareeb Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Farmaajo ay aa lagu waddaa in ay maanta gaaraan M/ Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qeyb gali doon n
Farmaajo oo maanta ku wajahan Dhuusa- mareeb Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweynaha Soomaaliya Md.Maxamed C/hi Farmaajo ay aa lagu waddaa in ay maanta gaaraan M/ Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka qeyb gali doon naa Shirka Madaxda do wlada dhexe iyo dowlad goboleedyadda oo lagu casuum ay. wajiga 2aad ee shirka Dhuusamareeb ee looga arrinsanayo xal u helista doorashada ayaa inta badan waxaa ka qeyb gali doonna Madaxda dowladda dhexe , kuwa iyo dowlad goboleedyada. Diyaargarowga soo dhaweynta Mada xweyne Farmaajo ayaa hadda ka socoto M/ Dhuusamareeb. Iyadoo
Xasan Abshir Faarax oo lagu aasay M/Garoowe
Allaha u naxariistee R/Wasaarihii hore ee Somaliya, Xasan Abshir Faarax ayaa Khami istii Aas Qaran loogu sameeyay M/ Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.
R/Wasaarihii hore ee dalka ayaa Axadii ku geeriyooday isbitaal ku yaala M/Ankara ee Xarunta Dalka Turkiga, meydkiisa aya ana saqdii dhexe ee habeen hore laga soo qaaday Garoonka Diyaaradaha ee M/Anka ra, iyadoo Khamiistii la keenay M/Muqdisho.
Aaska qaran ee M/Garoowe loogu sameyay ayaa waxaa ka qaybgalay R/Wasaaraha XFS, Xasan Cali Khayre, Gudoomiyaha G/ Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya, Cabdi Xaashi C/hi, Madaxweyne-yaasha Pu ntland, Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Wasiiro, Xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada.
Shacabka Soomaaliyeed waxa ay xusu usnaan doonaan dadaalkii, dowlad jacaylkii iyo doorkii muuqday ee Marxuum Xasan Ab shir Faarax uu ka soo qaatay dowlad dhiska, samata-bixinta, nabadeynta iyo dib u dhiska dalka, waxa uuna marxuumku tusaale u ah aa malaayiinta Soomaaliyeed ee u taagan adkeynta midnimada, u tanaasulka danta gu ud iyo dib u soo noolaynta maqaamkii aynu ku lahayn dalalka Caalamka.
Nin shan qof oo isku qoys ah hal goob ku dilay oo gacanta lagu dhigay
Ciidamada Booliiska Maamulka Ga lmudug ayaa Shalay M/Gaalkacyo ku qabtay nin 5 ruux oo isku qoys ahaa ku dilay duleed ka Magaalada Muqdisho.
Taliyaha Booliiska qeybta G/Mudug G/ Dhaxe Qaasim Shirdoon Cali oo warbaahi nta la hadlay ayaa sheegay eedeysane Aways Cu smaan Cabdi oo loo heysto dil ka 5-qofood ay qabteen, iyadoo uu sheegay in ay la socdeen dhaq-dhaq aaqiisa markii uu soo galay Magaaladana ay gacanta ku dhig een, cadaaladana ay u gudbi doonaan.
Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha G/Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye, waxuuna bogaadiyey sida ciidamada ammaanka ay gacanta uga geysteen soo qabashada eedeysanaha.
Horraantii bishaan xilli habeen ah ayey ahayd markii eedeysanahan uu weeraray qo ys uu gabar ka qabay, waxuuna dilay 5 qof, halka 4 kale ay dhaawacmeen, dha maantoo dna dadkaasi waxay ahaayeen isku Qoys.
Taliska Booliiska Somalia oo war kasoo saaray nin dil wadareed geystay oo lagu qabtay Gaalkacyo
Ka dib markii Shalay taliska booliiska G/Mudug ay sheegeen inay gacanta ku dhi ge en nin la sheegay in 7aad kii hore Dil wadareed ka gey stay dule edka M/ Muqdisho.
Abbaare 06:00 AM, ayaa Boliiska D/Gobole edka Gal mudug ee Ci idan ka Boliiska Soomaaliyeed, ay gacan ta ku Soo dhigeen eedeysane, Aw eys Cisman Cabdi, oo 9/July/2020 dilay ilaa 4 qofood, dhaawacayna ilaa 5 kale Tabeela ha Sheikh Ibraahim ee deegaanka Garasb eeleey.
Qabashadaan ayaa ku Soo aaday kadib iskaashi ay sameeyeen Hoggaanka Baarista Dembiyada iyo Boliiska D/G/Galmudug ee Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, sida uu xa qiijiyay Qaasim Sheekh Doon Taliyaha Qey bta Boliiska Gobolka Mudug.
Taliska Booliiska ayaa sheegay in dhawa an Saxaaafadda usoo bandhigi doonaa si ay ugu wareejiyaan hay’adaha Garsoorka Dal ka si Cadaalada loo waawaafajiyo.
Shabeelle oo ku fatahay degaano ka tirsan Shabeellaha Hoose
Saacadihii la soo dhaafay ayaa Wabiga Shabeelle waxaa uu fataahad ka geystay Xaafado ka tirsan D/fgoo ye ee G/Sh/Hoose& deg aano hoostaga,waxaana uu sababay khasaaro ka la duwan.
Waxaan ka mid ah xaafadah uu ku tahay Xaafada Eytaro oo ku dhow Buundada deg mada Afgooye,Xaafada Siigaale iyo Xaa fa do kale. Tuulooyinka uu Wabiga ku fatahay ayaa waxaa kamid ah,Jambaluul, Basro, Ba qdaad, Sagaaladaad gaalwuri iyo Sabiid iyo Caanoole,waxaana sidoo kale xirmay oo me el loo maro la la’yahay Masaajidka weyn ee Isbaheysiga ee degmada Afgooye iyo Isbitaalka degmadaas.
Fatahaada Wabiga uu ka sameeyay de gmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa uu sababay inay baaba’aan dal agyo dhowr ah oo ku tacbanaa beeraha si doo kale inay barakacaan qaar kamid ah dadka ku nool degmada Afgooye ee G/ Sh/Hoose.
Maamulka GSh/Hoose ayaa sheegay in dadka ku nool D/Afgooye ee uu saameeyay fataahada wabiga ay gurmad eg deg ah gaa rsiin doonaan,sidoo kale ay qaadi doonaan tallaabo looga hortagayo fatahaado horleh.
Ingiriiska oo cusboonaysiiyay xayiraa daha safarka ee Soomaaliya
D/Boqortooyada Ingiriiska ayaa dib u cus booneysiisay xayiraadihii dhanka safarka ee ay ku joojisay Soomaaliya iyada oo muwaa diniinteeda ku boorisay inaysan u safrin Soomaaliya.
Xafiiska Arimaha Dibada ee UK, ayaa ka digay in Soomaaliya ay wali dagan tahay isla markaana ay qatar ugu jirto weeraro argagi xiso. UK, waxay kula talisay muwaadiniinte eda tagaya Hargeysa iyo Berbera inay feej ignaadaan.
"Argaggixisada waxay u badan tahay in ay isku dayaan inay weerarro ka fuliyaan gu daha Soomaaliya' iyagoo intaas ku daray in ay jirto khatar sare oo afduub oo dalka oo dhan ah,” ayaa lagu yidhi qoraalka.
In ka badan 3sano oo hor leh ayay Uk ko rdhisay xayiraadaha dhanka safarka Sooma aliya.
Muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan oo lagu qabtay xeebaha dalka Ingiriiska
Dad muhaajiriin ah oo Soomaali ay ku jir aan ayaa waxaa lagu qabtay xeebaha dalka Ingiriiska. Muhaajiriintan ayaa waxa ay ka soo kala jeedaan sida la sheegay dalalka Ir an, Yemen, Masar iyo Soo maaliya, iyagoo u socd ay dalka Ingiriiska iyo qaradaha kale sida Asia iyo Amerika.
Ciidamada Ilaalada xeebaha ee dalka In giriiska ayaa qabtay muhaajiriintan oo la soc day doomo yar yar oo Lix xabo ahaa, inkas ta oo aysan shaacin tiradooda guud.
Mudooyinkii dambe ayaa waxaa sii yar aanayay muhaajiriinta iyo tahriibayaasha do onaya in ay isaga kala tallaabaan qaaradaha dunida .
Baarlamaanka Taiwan oo Shalay gacan ta la isula tagey
Xubnaha baarlamaanka dalka Tawian ay aa ku dhex dagallaamay gudaha baarlamaa nka xilli ay ka doodayeen ansixinta masuul ka tirsan guddi madax-ba nnaan oo la socda haw laha la xisaabtanka dowla da.
Waa markii 3xaad oo ay xubnaha iskula tagaan feer iyo ha raan ti 2dii isbuuc ee la soo dhaafay.
Chen Chu, oo ah xubin ka tirsan xi sbiga tal ada dalk aasi haya ayuu soo jeediyay mada xwey naha dalkaasi in loo magacaaba mada xa gu ddiga dabagalka hawlaha dowla dda balse mucaaradka ayaa ku gacan seyray soo jeed intaasi.
IGAD oo rajo wanaagsan ka muujisay Wa da hadalka Soomaaliya iyo Somaliland
Urur-gobaleedka IGAD ayaa taageeray wada hadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland oo ay ma rtigalinayso Jabu ui.
Shir madaxeedkii 36 -aad ee Urur-gobaleed ka IGAD oo ay hog gaamiyaasha waddama da xubnaha ka ah kaga qaybgaleen khadka tooska ah, ayaa lo oga hadlay horumarka wa dahadalada iyada oo dhammaan la muujiyey rajada laga qabo in xal la helo.
Waxaan bogaadineynaa wadahadalada socda ee D/FS & Somaliland, ee uu hogaa minayo Madaxweyne Ismacil Cumar Geelle iyo R/Wasaare Abiy Ahmed, Waxaan rajo wanaagsan ka filaynaa guddiyada farsam ada ee wadaxaajoodka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay IGAD.
Shirka fiidiyowga waxaa ka soo qeyb ga lay dhammaan hoggaamiyeyaasha IGAD, ku waas oo ka warbixiyay horumarka laga gaa dhay xallinta khilaafaadka K/ta Suudaan, jaw aabta waddamada xubnaha ka ah urur gobo leedka IGAD ee arrimaha COVID-19 iyo arr imo kale oo la xiriira iskaashiga iyo is-dhe xgalka dhaqan-dhaqaale ee gobolka.
Mowqifka ay ka taagan tahay IGAD ayaa yimid shan maalmood uun kadib markii dib loo dhigay kulankii guddiyada wada xaajoo dka.
Wararka ka imanaya Jabuuti ayaa tilmaa maya in DFS ay codsatay in wadahadalada dib loo dhigo muddo 7baad ah.
DFS ma aysan sharraxin ka codsigooda dib u dhigista ah, laakiin waxaa soo baxday inuu jiro culeys siyaasadeed oo sii kordhe ysa oo ka imanaya mucaaradka iyo maamul goboleedyada ee arrimaha doorashooyinka soo socda.
Soomaali walaac ka muujisay tallaabo ay qaaday Dowladda Turkiga
Dowladda Turkiga ayaa soo saartay xeer muwaadiniinta dalal badan oo waddankaasi dal-ku-galka dalxiiska ah ku galay u diidaya in sanad ka badan degganaashaha loo cusb ooneysiiyo.
Soomaalida ku dhaqan waddankaasi ka ma mid ah dadka uu go’ aankani qabana yo. Sha rcigan ayaa saameeyay muwaadiniin u dhashay dalka Jibuuti oo tiradooda lagu qiya asay 70 qoys. Yaasiin Macallin Cismaan Gu ddoo mi yihii hore ee Jaaliyadda Jabuuti ee dalka Tur kiga ayaa sheegay in arrintaan walaac ba dan ay ka muujinayaan dadka Soomaaliy eed ee kumaanka gaaraya,kuwaas oo ku nool gudaha dalka Turkiga.
Dalka Turkiga ayaa waxaa ku nool Soo maali farabadan,kuwaas oo qaarkood u joo go waxbarasho,waxaana ay haatan walaac ka muujinayaan tallaabada ay qaaday Xuku umadda Ankara.
Madaxweyne Deni oo kulan la qaatay Wefdi ka socday dowlad deegaanka Soomaalida
Madaxweynaha D/G/Puntland Md/Siciid C/hi Deni, ayaa Shalay qasriga Madaxtooya da ee Garoowe ku qaabil ay Wafdi ka socda DDS oo hoggaa minayo Wasii rka Tacliinta Sare iyo Sey niska Md. C/hi Maxamed Muuse
Wafdiga oo ay ka midyihiin Lateliyeyaal Madaxweyne,Guddooomiyaha G/Doollo, Aq oonyahano iyo Siyaasiyiin hore ayaa Ma dax weynaha u gudbiyey dhambaal tacsi ah oo ay uga wadeen Madaxweynaha DDS Md. Mustafe Maxamuud Cumar, oo Puntl and iyo guud ahaan Soomaaliya uga tacsiy adeeyay geerida R/wasaarihii hore ee So omaaliya Xasan Abshir Faarax iyo Madaxwe ynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xa ashi.
Dalka Hindiya oo cudurka COVID-19 uu faro ba’an ku hayo
Waxaa sii kordhaya dadka uu soo ku dhacayo cudurka Coronavirus ee gud aha da lka Hindiya. Dawlada dalkaasi ay aa waxa ay warbaa hinta u sheegtay in hadda ay gaareen 1 Mil yan oo ruux, welina ay jirto cabsi laga qabo in uu intaas ka sii kordho.
Waxaa sii yaraanaya sariiraha loogu ta lo galay bukaannada ee yaalla goobaha sida gaar ah loogu talo galay dadka uu ku dhaco cudurkaan Covis-19.
Dalka Hindiya ayaa sidoo kale waxaa ka jirta in ay sii kordhayaan dadka uu soo rida nayo cudurkan iyadoona shacabka iyo daw laduba ay soo wajahday cabsi ay ka qabaan cudurkan.
Inkasta oo cudurkan uu dalalka qaar ee dunida ay sii yaraaneysay bilihii u dambee yay ayaa haddana waxa uu u muuqdaan in uu faro ba’an ku hayo dalka Hindiya.
Christiane Ossouka Raponda oo ra’iisul Wasaare loo Magacaabay
Madaxweynaha dalka Gabon Cali Bongo ayaa Christiane Ossouka Raponda u mag acaabay inay noqoto ras’iisal wasaare.
Waxay noqoneysaa haweene ydii ugu horreysay ee hoggaa mi sa gol aha wasiirada dalkaasi ku yaa lla galbeedka Afrika.
Haweeneydan 56 jirka ah ayaa baddeley sa Julien Nkoghe Be kale, oo xilkaasi haysay muddo 18 bilood ah.
Madaxweyne Bongo ayaa dhwor isbuuc lagu arkin meel fagaara ah, waxaana jirta ha dal hayn inuu xannuusan yahay.
Tobannaan ruux oo Af-duub loo hays tay dalka Cameroon oo lasii daayay
Wararka laga helayo dalka Cameroon ay aa waxay sheegayaan in 10naan ruux oo loo gu haaystay Afduub Gobol ku yaalla Koonfur galbeed oo carruur badani ku jirtay la siidaa yay, kadib dhowr maalmood oo dabley looga shakisanyahay Anglophone ay haasteen. Macadda in madax fur asho laga bixiyay iyo in kale. Xilli hore waxaa warbaahinta la had lay mid kamid ah saraakiisha dowladda, ga ar ah aan dhinacyada gooni u goosadka doo nayo, oo lagu magacaabo Gen Ayeke , wa xa uu na sheegay in Af-duubka ay ka demb eeyaan iyaga, waxa uuna intaa ku daray dalbashada madax furasho.Qiyaastii 60 ru ux ayaa laga qafaa shay deegaanka Mm ouck Leteh Axaddii ay nu soo dhaafnay, waxayna taasi keentay in ciidama da Militar-ga Cameroon ay sameey aan gow-gal ballaaran.
Kala soocista shacabka Cameroon ayaa waxa dhaq-dhaqaaqyada la xiriira la billaab ay sanadkii 2016-dii, waxaana dagaal ku sal eysan luuqadaha dadka ku hadla English-ka iyo faransiisku ay keeneen jah-wareer amm aan.
Qiysaasaadka ayaa sheegaya in ku dho waad 3000 oo ruux ay ku dhinteen colaadda as . Billowgii bishaan qaar kamid ah hoggaa miyayaasha kooxda kala milanka dooneysa oo maxaabiis ah ayaa waxaa la kulmay sar aakiil iyo madax ka socota dowladda Camer oon , waxayna billaabeen dadaallo lagu wa da hadlayo
Jabuuti oo shaaca ka qaaday xiliiga ay duulimadyada caalamiga dib u fureyso
Dowladda Jabuuti ayaa markii u horey say si rasmiya u shaacisay xiliga ay dib u fur eyso duulimaadyada caalamiga ah oo in mu ddo ah u xayirnaa sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee Coronavirus/Covid-19.
Jabuuti ayaa hore u diiwaan-gelisay Kiis as badan oo cudurkaasi ah, taasi oo sabab tay inay xukuumadu soo rogto xayiraado loo ga baaqsanayo in dal ka asi uu ku faafo, ink asta oo muddooyinkii da mbe hoos u dhacay, si da uu sheegay Wasiirka gaadi idka dalkaasi.
Maxamed Muuse Axmed, Wasiirka gaadi idka dalka Jabuuti ayaa sheegay in maanta ay qorsheynayaan inay dib u furaan duulima adyadii caalamiga ahaa, kaasi oo 18-kii Bi shii Maarso ee sanadkaan ay u joojiyeen cu durka Covid-19 dartiis.
Xanibaada dhanka duulimadyada ee dal ka Jabuuti ayaa hoos u dhac baahsan ku ke entay dhaqaalihii dalkaasi tan iyo markii ay joojiyeen, sida uu ka dhawaajiyey Wasiirka gaadiidku.
Ugu dambeyntiina waxa uu Wasiirku she egay in gudaha madaarka dalkaasi ay ku diy aariyeen goobo dadka looga baarayo cudur ka safmarka ah ee Coronavirus, taasi oo loo ga hortagayo in qof cudurkaasi qaba uu gud aha u galo magaalada Jabuuti. Dalka Jabu uti ayaa mar safka hore ka galay dalalka Afr ika ee kiisaska ugu badan ee Covid-19 laga diiwaan-geliyay, inkasta oo ay hoos u dhac een muddooyinkii dambe, isla mar kaana ay dad hor leh ka bogsadeen.
Kumanaan Arday ah oo u Fariisanaya Imtixaanadka Midaysan ee Dugsiga Sare ee Soomaaliya
Sabtida maanta ah sida laga soo xigtay w asaaradda waxbarashada Soomaaliya arday gaareysa 34-kun ayaa u fariisaneysa imtixa anka shahaadiga ah ee dowladda, kuwaas oo ku kala sugan koonfurta iyo bartamaha dalka.